Vamwe vaongorori vanoti Apple ichawana mari shoma kune yega yega iPhone X yakatengeswa | IPhone nhau
Vamwe vaongorori vanoti Apple ichaita mari shoma kune yega yega iPhone X inotengeswa
Kana iyo iPhone X nyowani yakapihwa zviri pamutemo pazwi rekupedzisira, vazhinji vateveri vekambani vaive vakamirira chii chaizove mutengo.
MuUnited States mutengo wekutanga i $ 999 kwainofanira kuwedzerwa mitero inoenderana mudunhu rega rega. Semazuva ese, vazhinji ndivo vaongorori uye nyanzvi dziri kuyedza tora zano rekuti Apple ichaita marii nekutengesa kwechigadzirwa chimwe nechimwe, sezvo ichifungidzirwa kuti iwo wakakwira mutengo, iwo wakanyanya kubatsirwa, chimwe chinhu chisingawanzo kuitika.
Zvinoenderana neWall Street Journal mushure mekutaura nevanoongorora vanoverengeka, mutengo wakazara wezvinhu zvakasiyana zviri chikamu cheiyo iPhone X, zvakapetwa kaviri mitengo yekugadzira yeiyo iPhone 7 yakaratidzwa gore rapfuura. Mutengo wezvinhu zvese, kusanganisa mutengo wekuzviunganidza, unenge wakakwira kunge $ 581, nepo mutengo wezvinhu zviri chikamu cheiyo iPhone 7 yaive $ 248, sekureva kwaSusquehanna Internaional Group, zvichiratidza kuti margins eApple zvidiki.
Asi idzi dhata dzinofanirwa kutorwa nezvimedu, nekuti kudzamara chimwe nechimwe chezvinhu zvaro chakazivikanwa, kuongororwa chaiko hakugone kuitiswa. Uye zvakare, isu hatizive mutengo wakabhadharwa neApple kune chimwe nechimwe chezvinhu, mutengo uyo usiri, nekure, wakaita sekunge unotengwa zvidiki zvidiki. Susquehanna anoti ruzivo urwu rwakawanikwa kubva kunowanikwa mumutsetse wegungano.
Kune izvi zvinokwanisika zvemutengo, isu tinofanirwa kuwedzera mutengo wekuunganidza chimwe nechimwe, mutengo uyo zvinoenderana nerunyerekupe rwakawanda yakwira nekuda kwekuoma kwekumisikidza kuratidzwa uye iyo inobata pani yakazvimiririra, sekukuzivisa kwatakaita mazuva mashoma apfuura. Kumutengo wezvese wekugadzira, kusanganisira mari yemusangano, tinofanirwa kuwedzera iyo R & D mari iyo Apple yakapa ichi chigadzirwa, pamwe nemari yekuparadzira, mutengo webhokisi, tsika, kuchengetedza Apple Stores ...
Gore rega rega, Apple inoratidza kuti chikamu chemubhadharo chakakomberedza makumi matatu kubva muzana, kunongedza kumusoro, kunongedza pasi, kuva zvakangofanana nemakambani ese eetekinoroji, saka kutaura kuti Apple ine purofiti yakawandisa kubva kune yega yega iPhone yaanotengesa kutaura nekuda kwe kutaura pasina kufunga nezve chero cheese maficha ane chekuita nekugadzirwa, kugadzira uye kutengesa kwechigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Vamwe vaongorori vanoti Apple ichaita mari shoma kune yega yega iPhone X inotengeswa
Hazvina kugadzikana kuverenga chinyorwa pa iPhone nguva pfupi yadarika, nekuti kushambadzira kunoita kuti zvinyorwa zvikwire zvichidzika zvichiramba. Semuteveri weblog rino ini ndinofunga iwe unofanirwa kuve nekuzvipira kudiki kune vaverengi uye kwete kupindira pakuverenga kwavo zvinyorwa zvakanaka. Nekuti iko kunorwadza dhongi.
Ini ndichaita kuti maboss azive nezvazvo.
Uku kunyepa nekuti vakatoita mutengo weiyo iPhone x uye zvakabuda kuti zvinodhura maeuro mazana matatu kuigadzira uye iyo iPhone 350 inodhura mazana maviri nemaviri kuitira kuti vasarasikirwe nechinhu kana vakasahwina, mutsauko i7 euros zvimwe uye iyo iPhone x yakwira mazana matatu euros zvichienzaniswa ne220 iyo iyo ine purofiti ye130 euros yakawanda kune imwe neimwe iPhone
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kufunga nezvekuti ruzivo urwu rwakawanikwa kupi. Iyo yaunotaura haina kunge yakapesaniswa nechero nzira, iyo yandinonyora inobva kuWall Street Journal, iri inozivikanwa svikiro.
Zvinyorwa pahupenyu hwaClive Davis zvinorova Apple Music muna Gumiguru
iOS 11 GM vs iOS 10.3.3, bhatiri bvunzo bvunzo